Masiibo dabiici ah: waa maxay, sifooyinka, sababaha iyo noocyada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 14/07/2021 11:25 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Dhulkeenna waxaa ka jira khataro badan oo xagga deegaanka ah oo ay tahay inaan tixgelinno maadaama cawaaqibyadoodu ay aad u daran yihiin. Waxay ku saabsan tahay masiibo dabiici ah. Had iyo jeer waa dhacdooyin si taban u saameeya nolosha iyo aadanaha guud ahaan waxaana guud ahaan sababa ifafaaleyaal imanaya faragelin la’aan aadane. Xaaladaha badankood, bani'aadamku wuxuu mas'uul ka yahay saameynta cawaaqibta dhaqamada xun, ha noqoto farsamo ama qorshe xumo.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay yihiin aafooyinka dabiiciga, astaamahooda, cawaaqib xumadooda iyo tusaalooyinkooda.
1 Waa maxay aafo dabiici ah
4 Noocyada masiibada dabiiciga ah
Waa maxay aafo dabiici ah
Musiibooyinka dabiiciga waa dhacdooyin dhaca iyada oo aan la helin faragelinta aadanaha, kuwaas oo saameyn taban ku leh nolosha iyo aadanaha. Xaalado badan, bini'aadamka ayaa mas'uul ka ah saameynta cillad farsamo, dayacaad, ama cawaaqibta qorshooyinka xun.
Marka loo eego noocyada dhacdooyinka dabiiciga ah ee keena musiibooyinka la xiriira, waxaa jira sababo badan oo keena musiibooyinka dabiiciga ah. Guud ahaan, aafo dabiici ah ayaa ah waxaa sababa ifafaalaha cimilada, geomorphological geedi socodka, arrimo bayooloji ama ifafaale cirka ah. Dhacdooyinkan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin musiibooyin markay gaaraan heer aad u sarreeya. Musiibooyinka dabiiciga ah ee la xiriira cimilada waxaa ka mid ah duufaannada kuleylaha, daadadka, abaaraha, dabka duurka, duufaannada, hirarka kuleylka, iyo hirarka qabow. Dhinaca kale, waxaan leenahay aafooyinka meelaha bannaan oo aad uga yar soo noqnoqoshada saameynta meteorites iyo asteroids.
Musiibadu waa dhacdo ku dhacda muddo gaaban, guud ahaan lama saadaalin karo oo saameyn taban ku leh nolosha. Musiibooyinku waxay u dhici karaan si dabiici ah, oo ay sababaan arrimo bini aadam, ama ay sababaan arrimo dabiici ah iyo kuwo bini aadam labadaba.
Marka dhacdo, si toos ah ama si dadban, saameyn taban ku leh aadanaha, waxay noqoneysaa musiibo. Markay dhacdo dhacdo iyadoo aan faragalin biniaadam lagu samayn, waxaa loo arkaa mid dabiici ah asal ahaan. Tani waa fikrad duleed oo bini'aadamku ku yaalliin sidii hay'ado ka baxsan dabeecadda. Sidaas ayuu qofka aadamuhu ku kala saaraa ficilkiisa iyo cawaaqibka ka dhalan kara dhacdooyinka kale ee koonka ka jira.
Sababaha keena masiibooyinkaan waxaa kamid ah waxyaabaha soo socda:
Sababaha cimilada: waxay ku dhacaan kala duwanaanta cimilada hawada marka la eego heerkulka, roobka, dabaylaha, cadaadiska hawo, iwm. Badanaa isbedelkan lama filaanka ah ee isbeddelada cimilada ayaa sababa ifafaale sida duufaannada, dabeylaha korantada, duufaannada, hirarka qabow ama kuleylka.
Sababaha cilmiga dhirta: waxay badanaa dhacaan marka dhaqdhaqaaqa taarikada tektikada iyo dhaq dhaqaaqa dhulka qolofta iyo gogosha ay sababaan dhulgariirro, tsunamis iyo qaraxyada fulkaanaha.
Sababaha bayoolojiga: isu dheelitir la'aanta nidaamka deegaanka waxay u horseedi kartaa koritaanka noolaha cudurada keena iyo vector-kooda. Sidan oo kale, koritaanka bakteeriyada iyo fayrasku waxay abuuri karaan cudurro faafa ama faafa.
Meel banaanka ah: Meteorites iyo asteriyoodhyada galaya jawiga dhulka waxay sababi karaan waxyeello daran.
Noocyada masiibada dabiiciga ah
Dhacdo kasta oo saameysa heerarka ba'an waxaa loo tixgeliyaa masiibo dabiici ah. Aan aragno waxa ay yihiin:
Daad badan: waa dhicitaanka baraf aad u tiro badan oo leh dhul jiq ah oo ay ugu wacan tahay saameynta culeyska. Haddii ay ka dhacdo meelaha ay bini aadamku degan yihiin ama ay ku safraan, waxay u horseedi kartaa musiibo daran.
Duufaan kuleyl leh: Waxay yihiin duufaanno baaxad weyn leh. Duufaannadaas waxaa weheliya roobab culus iyo dabeylo xawaare sare ku socda. Dabayluhu waxay sababi karaan raaxo darro xagga badda ah, daadad, waxay burburin karaan kaabayaasha dhaqaalaha waxayna xitaa sababi karaan dhimashada dadka.
Bogagga dhulka: Waa dhaqdhaqaaq la mid ah qulqulka barafka laakiin leh dhul ballaadhan oo rogrogmadaya ayaa aad u sarreeya. Badanaa waxay dhacdaa roobab xoog badan oo daba dheeraada awgood oo ciidda ku dherjiya biyaha sababana go'itaanka dhulka. Waxay sidoo kale ku dhici karaan jiritaanka dhulgariir dartiis.
Cudurrada faafa iyo faafa: cudurada faafa waxay sababi karaan dhibaatooyin daran. Cudurrada faafa waxay ku faafayaan faafa waxayna sababi karaan faafitaan.
Qaraxyada Fulkaanaha waa ceyrin ballaaran oo ah magma, dambas iyo gaasas ka yimaada gogosha dhulka. Magmadu waxay u sii gudubtaa qulqulka qulqulka dhulka dushiisa oo gubanaya wax kasta oo jidka ku jira.
Hambalyo: duufaanno culus oo wata 5-50mm oo roob dhagax ah oo baraf ah ayaa saameyn ku yeelan kara oo sababi kara waxyeelo weyn.
Saamaynta Meteorite iyo: way yar yihiin laakiin waxay sababi karaan dhaawac culus. Meteorite waa jidh samaaleed yar oo cabirkiisu yahay 50 mitir dhexroor.
Dabka kaynta: Inta badan dabka duurjoogta ah waa kuwo dad sameeyay, in kastoo qaar badani si dabiici ah u dhacaan. Xaaladaha abaaraha ee daran ayaa si iskiis ah u shidi kara dhirta qalalan oo dabka bilaabi kara.
Daadadka: Waxaa lagu soo saaraa qulqulka wabiyada waaweyn iyo harooyinka markay jiraan roobab badan. Daboolka dheer ayaa burburin kara kaabayaasha dhaqaalaha, jiidi kara xayawaanka iyo dadka, geedaha xididada u siibi kara, iwm.
Abaaraha: Waa roob la'aan muddo dheer iyo heerkulka sare ee ka dhasha. Dalaggii ayaa luntay, xooluhu way dhintaan, bani-aadmigana waxaa lagu qasbay inay ka baxaan aagga gaajo iyo harraad darteed.
Dhulgariirrada: aad baa looga baqayaa inay noqdaan wax aan la saadaalin karin waxayna la imaan karaan cawaaqib xumo. Waxay dumin kartaa dhisme, waxay sababi kartaa qaraxyo, waxay jabisaa dhuumaha biyaha, biyo xireenno iyo shilal kale.
Dabaylaha ciidda iyo boodhka: waxay ku dhacaan aagagga oomanaha iyo semi-oomanaha. Gaar ahaan lamadegaanka waxaa sababa dabaylo xoog leh oo carada gala oo sameeya daruuro sababi kara dhimashada dadka nool neef qabatin iyo xoqid awgeed.
Qaybaha la hakiyey- Waxaa sababa ciida iyo duufaanka boorka waxayna noqon karaan wasakhooyin dhib badan oo sababa dhibaatooyin neefsasho oo daran.
Dabeylaha korantada: Waxay u dhacaan sababo la xiriira is-urursiga casriyeynta hawo kulul iyo qoyan oo gala jawi aad u deggan. Natiijo ahaan, danab iyo hillaac ayaa curiya oo ay weheliyaan roob xoog leh, dabayl iyo xitaa roob dhagaxyaale.
Duufaano: waa daruur sii kordheysa oo sameysa koor hawo ah oo kacaan ah. Waxay burburin karaan kaabayaasha dhaqaalaha, waxay dhaawici karaan waddooyinka isgaarsiinta waxayna halis gelin karaan nolosha xoolaha iyo dadka.
Sunaamis: sidoo kale waxaa loo yaqaan mowjadaha hirarka. Waxaa sababa jiritaanka dhulgariirka biyaha hoostiisa mara ee sababa mowjado waaweyn oo xawaare sare ku socda. Saameynta xeebta waxay soo saari karaan masiibooyin waaweyn oo saameyn ku yeelan kara daadadka.
Mawjada kuleylka: Waxay ka kooban tahay kororka heerkulka joogtada ah ee gobol ka sarreeya celceliska caadiga u ah isla meeshan iyo muddada sannadka. Badanaa si wanaagsan ayey u weheliyaan abaaro.
Mawjad qabow: ka soo horjeedka ayaa ah hirarka kuleylka waxayna badanaa la socdaan cimilo xumo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa aafada dabiiciga ah iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Musiibooyinka dabiiciga ah